4 zvikonzero nei uchifanira kushandisa Drupal seCMS yeyako saiti | ECommerce nhau
4 zvikonzero nei uchifanira kushandisa Drupal seCMS yeyako saiti
Susana Maria Urbano Mateos | | CMS uye Technology, Zvidzidzo uye zviwanikwa
Kunge WordPress, Drupal iriwo imwe yeakanakisa "Zvemukati Management Systems" kana CMS, iyo iwe yaunogona kushandisa kubata zvirimo zvewebsite yako. Kunyangwe zviri pachena kuti WordPress ine yakakura mushandisi base, pane zvikonzero zvakanaka nei uchifanira kushandisa Drupal seCMS yeyako saiti.
1 1. Inopa agility kune bhizinesi
2 2. Kubudirira
3 3. Kubatanidzwa kugona
4 4. Zvinyorwa zvakagadziriswa
1. Inopa agility kune bhizinesi
Iyo nguva iri pakati pekuburitsa inoenderana nekuronga kwakarongeka Uyu mukana wemabhizinesi sezvo Drupal inowedzera mashandiro matsva nekukurumidza kupfuura zvaungatarisira nemamwe maCMS. Drupal inoita kuti mabhizinesi akurumidze kuchinjika neshanduko mumusika uye nharaunda nenzira dzinobudirira uye dzinobatsira. Pamusoro pezvo, kuchinjika kunoita kuti kuita kwepamusoro kuitwe nekukurumidza uye nemitengo yakaderera.
Iyi imwe yeiyo zvakanakira kushandisa Drupal panzvimbo yeWordPress. Drupal parizvino inoenderana nenzvimbo dzinonyanya kushandira pasi rese senge Twitter, Iyo Economist kana Weather. Kukwanisa kwaro kunoita kuti rikwanise kubata spikes dzakajairika kana huwandu hwakawanda hwevashanyi.
3. Kubatanidzwa kugona
Iyo ingangove imwe yeiyo zvinhu zvakanakisa nezve Drupal sezvo inokodzera mukati mebhizinesi ecosystem pachayo. Pamusoro inopa nzira yepamusoro yekugadzirisa zvemukati uye zvekushambadzira zvemadhijitari. Asi zvakare inokwanisa kuenzanisira iyo data uye kusanganisa akasiyana siyana ekushandisa uye masevhisi, zvichiita kuti zvive nyore kutora mukati mekambani.
4. Zvinyorwa zvakagadziriswa
Drupal ine mukana wakasarudzika pamusoro pevamwe mamaneja ezvemukati uye yatove yakagadzirirwa SEO. Inosanganisira maturusi emazwi akakosha manejimendi uye kugadzirisa, kurondedzera zvirimo, mazita emapeji, kusangana kweGoogle Analytics, sitemaps, nezvimwe. Iyo zvakare inosangana neese midhiya mapuratifomu uye inotsigira yakawanda nhamba yemafaira mhando.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » CMS uye Technology » 4 zvikonzero nei uchifanira kushandisa Drupal seCMS yeyako saiti
SEO Agency akadaro
Asi ini ndichiri kufunga kuti WordPress iri nani zvakanyanya munzira dzese.
Pindura kune SEO Agency
Webhu kumira akadaro
Tichafanirwa kuyedza kuti tione kuti inoshanda sei, zvinoita kunge inonakidza
Instagram inowedzera chinhu chitsva cheEcommerce
SEO uye Kushambadzira e-mabhuku aunogona kuverenga pane yako Android